कोरोना कहरको डायरी पल्टाउँदा…. – देशदृष्टि
कोरोना कहरको डायरी पल्टाउँदा….
Posted bymilanbagale November 4, 2020 November 4, 2020 Posted inUncategorized
सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा चीनको बुहान प्रान्तबाट फैलन शुरु गरेको कोरोना भाइरस नेपालमा २०७६ साल चैत १० गते प्रवेश गर्यो । भाइरस पसेको खबर भाइरल हुनु अगावै नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुपर्ने दबाव महसुस गरिसकेको थियो । त्यसकारण तयारी पूरा भैसकेको एसइइ परिक्षासमेत रोकियो । चैत ११ गतेबाट नेपालमा लकडाउन शुरु भयो । सिंगो संसार ठप्प भएको र मानव सभ्यताले अकल्पनीय कष्ट झेलिरहेको यो समयलाई लिपिबद्ध गर्ने रहर लागेर मैले चैत १० गतेबाट नै डायरी लेख्न शुरु गरें । लामै समय लेख्ने रहरले बाक्लो डायरी छानें । ‘पृथ्वीको डिलमा उभिएर’ शीर्षकमा पहिलो दिन ६ पेज लेखें । आजसम्म पनि यो लेखनलाई निरन्तरता दिइरहेको छु ।
डायरी लेखन शुरु गरेको दिनको तस्वीर
कोरोना कहर शुरु भएसंगै सिंगो संसार उत्तर कोरियाजस्तो भयो । जतासुकै ठप्प । सञ्चारले जोडिएपनि अरु सम्पर्क शुत्रहरु टुटे । जल, जमिन र आकाशबाट देशहरु छुट्टिए । सडकमा गाडी गुड्न छोडे । आकाशमा हवाईजहाज उड्न छोडे । समुन्द्रमा पानीजहाज चल्न छोडे । जहाज नदेखेर चराहरु नै अल्मलिएका हुन् कि जस्तो लाग्न थाल्यो । आकाश सफा देखियो । पानी सफा देखियो । श्वास फेर्न सजिलो भएको हो कि जस्तो महसुस भयो । पृथ्वीलाई सन्चो भएपनि मान्छेलाई विसन्चो भएकोले निरन्तर मास्क लगाउनुप¥यो । सफा देखिएको संसारमा हात धोएको धोयै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संसार सफा देखिएपनि भाइरसले संसारलाई कब्जामा लिइसकेको थियो । मानिसको जीवन घरभित्र कैद भयो । घरभित्र कैद हुँदा मानिसहरुले गर्ने कर्म कस्ता रहे भनेर मैले डिजिटल पत्रिका र सामाजिक सञ्जालतिर चिहाएँ । सरकारका नीतिनियम र काम बारबाहीबारे निरन्तर पढिरहें । आफ्नो फेरिएको दिनचर्या पनि जोडेर डायरीमा उतार्दै गएँ । घरै बसेर पेशा ब्यवसायमा जोडिएँ । गोरखा, बाजुरा, डोटी, बाँके रौतहटसम्म भर्चुअल तालीम, गोष्ठी, छलफल, भेला र कक्षामा जोडिदाका अनुभूति लेख्दै गएँ ।
कोरोना कहरको डायरी
लकडाउनको शुरुवातमा सबैजना तरकारी, फलफूल, अत्यावश्यक खाद्यान्न र ग्याँसको जोहो गर्नतिर लागे । बजारमा ग्याँस पाउन मुस्किल भयो । आधा सिलिन्डर ग्याँस बेच्ने चलनपनि आयो । औषधी पसलमा सुगर, प्रेसरजस्ता दीर्घ रोगका औषधीको हाहाकार भयो । सर्जिकल मास्क प्रतिगोटा २५ रुपैंया तिर्दापनि नपाउने अवस्था आयो । स्यानिटाईजर र मास्क खोज्दाखोज्दा हत्तु भएको थिएँ मपनि । सर्जिकल मास्क नपाएपछि केही हप्ता कपडाको राम्रो मास्क किनेर काम चलाईयो ।
बन्दाबन्दीको शुरुवाती चरणमा मास्क, ग्याँस सिलिन्डर, स्यानिटाईजर, दीर्घरोगीका औषधीसंगै इन्डक्सन चुल्होपनि निकै बिक्न थाल्यो । सरकारले नेशनल ट्रेडिङमार्फत सहुलियत दरमा इन्डक्सन चुल्हो बेच्न थाल्यो । इन्डक्सन चुल्हो अनलाइन मार्फत घरघरमै पठाइने चलन शुरु भएसंगै शहरको घरको दृश्य फेरियो । सफा उर्जाले घरघरमा स्थान पायो । साबुनपानीले मिचिमिचि हात धुन सिकाउने परियोजनालाई हियाउने समाज हात धुन सिक्न थाल्यो । हात धुन सिकाउने समाचार, पोष्टर र भिडियोले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल पत्रिका रंगिए । मास्क लगाउन सिकाईएका लेखहरु चर्चित हुन थाले । डायरीमा यी सन्दर्भहरु पढ्दा आफैंलाई अनौठो अनुभूति हुन्छ ।
कोरोना कहरपछि थपिएको इन्डक्सन चुल्हो
किराना पसल र तरकारी पसलको उद्यम कोरोनाकालमा ह्वात्तै फस्टायो । सटरै सटरको शहरमा तालैताला झुण्डिए । ब्यापारिक मल र अरु उद्यम ठप्प हुँदा तरकारी पसलमा भ्याइनभ्याई ब्यापार भयो । त्यही मेसोमा अनलाइनबाट तरकारी र फलफूल बेच्ने उद्यमपनि फस्टाएको महसुस भयो । पसलमा जान असुरक्षित महसुस गरेर मैले लकडाउनको शुरुवातीताका अनलाइनबाट २४ किलो तरकारी मगाएको थिएँ । ८ दिनमा मात्र घरमा तरकारी आईपुग्यो । कतिविघ्न ब्यस्त भएछन् । चैत १४ गते अर्डर गरेको तरकारी चैत २२ गते पो घरमा आईपुग्यो ।
सरकारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत हरेक दिन कोरोना कहरको रिजल्ट सुनाउथ्यो । म त्यसलाई त्यो दिनको लेखाईको अन्तिम प्याराग्राफमा समेट्दै जान्थें, अझैं समेटिरहेछु । डायरी पल्टाउदै जाँदा देखें, चैत २२ गते नेपालमा एकैदिनमा ३ जनामा संक्रमण देखिएको रहेछ । ३ जनामध्ये एकजनामा स्थानीय संक्रमण देखिएपछि ‘नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो’ भनेर डिजिटल पत्रिकाहरुमा लेखिएको रहेछ । तीन जनामध्ये दुइ जना भारतबाट आएका र एक जनामा स्थानीय संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको रहेछ । चैत २२ गतेसम्ममा नेपालमा ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भैसकेको रहेछ । स्थानीय संक्रमण देखिएसंगै बन्दाबन्दी थप कडाई पारिएको रहेछ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान नपाईने निर्णय सरकारले गरेको रहेछ ।
डायरी पल्टाउँदै जाँदा देखें, शहर त परिकारमय भएको । लकडाउनको शुरुवाती चरण लामो विदाजस्तो भयो । घरघरमा धेरथोर अन्न जम्मा भएकै थियो । अनेक परिकार पाक्न थाल्यो । त्यसको बास्ना सामाजिक सञ्जालमा फिजिन थाल्यो । शहरका घर रेष्टुरेन्टजस्तै बने । मिठाइ पसलजस्तै बने । घरघरमा रसबरी र जेरी पाके । लड्डु र अरु अनेक मिठाई बने । खरबुजाको बोक्राको अचार निकै चर्चित भयो । आँपका अचार र अम्चुरमय भयो सामाजिक सञ्जाल ।
अचार बनाउन सुकाइएको आँप
खानपिनको रमाईलो चरण सकिएसंगै लकडाउनको पीडा देखिन थाल्यो । खाद्यान्न संकट झेलिरहेका नागरिकको खबर डिजिटल पत्रिकामा आउन थाले । कतिपय पत्रिकाले छापा संस्करण बन्द गरिसकेका थिए । छापिएका पत्रिका देख्दै डरलाग्ने भैसकेको थियो । ससाना नानी अघि लगाएर कुम्लोकुटुरो बोकेर सयौं किलोमिटर हिडेर घर गईरहेका नागरिक, उनीहरुले भोगेका कठोर कष्ट र सरकारको असहिष्णु ब्यवहारले स्थान पाउन थाले । २०७६ साल चैत १८ गतेबाट सरकारप्रति नागरिकको गुनासो बढ्न थालेको रहेछ । बन्दाबन्दी गर्ने क्रममा भारतसंग जोडिएको सिमाना बन्दगर्दा कयौं नेपाली अलपत्र परेको खबरलाई डिजिटल पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापे । नाकाबाट छिर्न नपाएपछि महाकाली नदीमा ट्युबको सहायताले पौडेर नेपाल छिरेका युवालाई प्रहरीले पक्रेको नमिठो दृश्यले प्रहरी निकै आलोचित भयो । स्वास्थ्य मन्त्रीका असहिष्णु बोली र विभिन्न खरिद काण्डबारे समाचार माध्यममा खबरहरु आईरहे । राहत वितरणका नाममा नागरिकलाई अपमानित गर्ने ,नाममात्रको राहत दिएर आहत बनाउने कामले चैत अन्तिम हप्तातिरबाट व्यापकता पाएको रहेछ । बोर्डिङ स्कूलमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई राहत नदिने निर्णय गर्ने भानु नगरपालिकादेखि दीर्घरोगीलाई घरघरमै औषधी पुर्याउने, घरघरै डाक्टर लगेर नागरिकको स्वास्थ्य जाँच्ने हेलम्बुको स्थानीय सरकारका समाचार डिजिटल पत्रिकाहरुमा छाए ।
मिठोमसिनो पकाउने चरण सकिएसंगै बैशाख—जेठताका शहरमा कौशीखेती र जूम भेला एकैचोटी ह्वात्तै फिजियो । अचानक घरघरका छतमा माटो भरिएका थैला र गमला देखिए । सामाजिक सञ्जालमा जूम बैठकका स्क्रिनसट देखिन थाले । जूम बैठकका निम्तो आउन थाले । जूम बैठकका पोष्टर देखिन थाले । कौशी खेतीका बारेमा पनि जूम मार्फत अनलाइन तालिम चल्न थाले । अनलाइनमा कौशी खेती गर्ने अनेक सामान पाईन थाले । घरका रुखा छत हराभरा देखिए । मैलेपनि कौशीखेती गरें । २०७७ साल जेठ १८ गते यस्तो लेखेको रहेछु— ‘कंक्रिट रोपेर बनेको छ घरको छत । मरुभूमिजस्तो रुखो छतमा सिमेन्टकै बोरामा माटो र मल भरेर तरकारी÷फलफूल फलाउने रहर गर्दा रमाईलो अनुभूति हुने रहेछ । सिमेन्टको बोरामा माटो र मल । अनि हुर्कदो बिरुवा । बारीमा तरकारी फलाउँदाभन्दा भिन्न अनुभूति । ’
घरको छतमा बोराबारी
सधैंजसो कोरोनासंग सम्बन्धित समाचार हेडलाइन बन्ने अखबार र डिजिटल पत्रिकामा बैशाख ११ गतेचाहि कोरोनाको समाचार भेटिनै मुस्किल परेको रहेछ । सरकारले पार्टी फोर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएसंगै समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई प्रमका निकट सहयोगीले ‘अपहरण’ गरेको समाचार आएसंगै सरकारले थामिनसक्नु आलोचना बेहोर्यो । यो घटनाले धेरै दिनसम्म समाजलाई तरंगित बनायो । सरकारको आलोचनाको चरण लोकतन्त्र दिवसका दिन सांसद ‘अपहरण’ गरेर शुरु भएको हो । त्यो तरंग अझैंपनि धेरथोर छँदैछ ।
डायरी लेखन जारी छ ।
कोरोना कहरको डायरी लेखनलाई मैले निरन्तरता दिइरहेको छु । सरर डायरी पल्टाउँदा सम्झिएका कुरारु हुन् यी । ७ महिनामा मोटामोटा २ वटा डायरी लगभग भरिन लागे । एक दर्जनजति कलम सकिए । घटीमा १ पेजदेखि बढीमा आठ पेजसम्म लेखें । ८ बजे शुरु गरेर २ बजेसम्म पनि डायरी लेखिरहें । अझैं निरन्तरता दिइरहेको छु । कोरोना कहरको यो समयको समाजको शब्दचित्र, बन्दाबन्दी जीवनका आफ्ना अनुभूति र राज्यको कामकारबाहीको अभिलेखीकरण गरिरहेको छु । कोरोना कहरका कारण जीवनशैली फेरिएको छ । फेरिएका कतिपय कुरा अस्थायी होलान् । कतिपय कुराचाहि कोरोनाकाल अघिको जीवनमा नफर्केने गरि चल्लान् । मानव जीवनको यो संक्रमणको दस्ताबेजीकरण गर्ने सहज उपाय उपाय डायरी लेखन हो भन्ने लाग्यो । डायरीले समयको कथा बोल्छ । तथ्य, तर्क, तथ्यांक र अनुभूतिको मिश्रण हुने हुँदा साहित्य र गैरसाहित्यको मिश्रणजस्तो पनि हुन्छ । धेरै समयपछि पढ्दा आफ्नै जीवनलाई पछाडी फर्केर हेर्दाको अनुभूतिपनि हुन्छ । त्यसकारण यो कालखण्डको डायरी लेखनलाई मैले निरन्तरता दिइरहेको छु ।
(२०७७ साल कार्तिक १७ गते हिमालखबर डटकममा प्रकाशित)
कोरोनाकालको दशैं र गाउँको सम्झना
घुमघामका अप्ठेरा घुम्ती